छत्रेश्वरी मन्दिरकाे इतिहास
छत्रेश्वरी मन्दिर सल्यान सदरमुकाम खलंगादेखि दक्षिणतर्फ करिव २५ किलोमिटरको दुरीमा पर्दछ । यो छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा अबस्थित १३ सय मिटर उचाईको थुम्कोमा अवस्थित छ । शिखर शैलीमा बनेको यो मन्दिर वि.सं. १९९० को दशकमा शिव पार्वतीको मन्दिरको रुपमा स्थापित एवम् वि.सं. २०३७ सालमा नागाबाबाद्वारा जीर्णोद्दार गरिएको हो ।
मन्दिर परिसर उत्तरतर्फ एउटा ठुलो शिला रहेको छ । जहाँ सतीदेवीको सम्पुर्ण अङ्ग पतन भएको मानिन्छ । त्यहाँ अझै पनि आँखाले अबलोकन गरे सल्यानका गाँउबस्ती समेत देख्न सकिन्छ । महाशिवरात्रीका दिन यहाँ निकै ठुलो मेला समेत लाग्ने गरेको । यस दिन मनले चिताएको फल प्राप्त गर्न टाढा–टाढाबाट भक्तजनहरू आई शंखमुलमा स्नान गरी छत्रेश्वरी भगवतीको पुजा अर्चना गर्ने चलन रहिआएको छ ।
मन्दिरमा सत्य युगमा महादेवले सतिदेबीको मृत शरीर लाई बोकि ब्रमान्डको भ्रमण गराउने क्रममा सतिदेबिका बाकी रहेका सम्पुर्ण अङ्ग पतन भएको श्री स्वस्थानी ब्रतकथामा उल्लेख छ । साथै यहाँ स्थानमा पिचाशेस्वर महादेब र छत्रेश्वरी भगवती प्रकट भएको पाईन्छ ।
मन्दिरको तल शारदा नदिको छेउमा शंख आकारको मुल र सानो आकारको मन्दिर पनि छ । त्यसलाई शंकमुल भनिन्छ । छत्रेश्वरी मन्दिरमा पुग्ने भक्तजनहरुले त्यस मुलमा गई नुहाउने तथा जल छिटी शरीर चोखो गराउने गर्दछन् । सतिदेविका सम्पुर्ण अङ्ग पतन भई सकेपछी महादेबले त्यही मुलमा नुहाई कैलास पर्बत गएको धार्मिक किम्मदन्ती छ । अहिले यो मुलको छेउमा रहेको शारदा नदिमा अस्तु सेलाउने गरिन्छ ।
छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले यहाँ नेपालकै ठूलो शंक स्थापना गरी पार्क बनाउन लागेको छ । शंखमुल देखि करिब ३ किलोमिटर अगाडि सो मन्दिर रहेको छ । सतिदेविका बाँकी रहेका सम्पुर्ण अङ्ग पतन हुने क्रममा सो मन्दिरमा पिचाशेस्वर महादेब उत्पत्ति भएको पाईन्छ ।
पिचाशेस्वर महादेवकाे मन्दिर
शंखमुल देखि ४ किलोमिटरको दुरिमा छत्रेश्वरी मन्दिरको पारितिर छाँया ढुङ्गा रहेको छ । महादेवले सतिदेबीको मृत शरीर लाई बोकि ब्रमान्डको भ्रमण गराउने क्रममा सतिदेबिका बाकी रहेका सम्पुर्ण अङ्ग त्यहि छाँया ढुङ्गामा पतन भएको किम्मदन्ती छ । छाँया ढुङ्गा सिशा जस्तै टल्किने र वरिपरीका गाउँहरु देखिने गर्दथ्यो ।
जथाक लेक सल्यान जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो लेक हो । यो समुन्द्री सतह देखि २ हजार ८ सय मिटरको दुरीमा रहेको छ । यो छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ को बिच भागमा रहेको छ । यसको पुर्वतिर रोल्पा जिल्ला पर्दछ । यो लेक सँगै यसको वरिवरी होचा लेकको रुपमा पारिभरा र बुँरासे रहेका छन् । यो लेकलाई सल्यान कपुरकोटबाट रुकुम झुल्नेटा जोड्ने उत्तर–दक्षिण राजमार्गले छुने गर्दछ ।
यहाँबाट सल्यानका अधिकांस ठाउँ तथा रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, डोल्पा, दाङ, बाँके, बर्दिया, प्युठान, बागलुङ देख्न सकिन्छ । धौलागरी र सिस्ने हिमालको पनि नजिकबाट नियाल्न सकिने ठाउँ हो यो । यहाँ विभिन्न खाले बहुमुल्य जडिबुटीहरु पनि पाउने गर्दछ । घना जंगल र पदमार्ग यहाँको एउटा आकर्षणको रुपमा रहेको छ ।